Vashanyi veRussia vakasungwa muTurkey nekutanga moto wemusango weAntalya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Vashanyi veRussia vakasungwa muTurkey nekutanga moto wemusango weAntalya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Vashanyi veRussia vakasungwa muTurkey nekutanga moto wesango.
Vafambi vekuRussia vanofungidzirwa kuti vakakonzeresa netsaona moto watanga pedyo nenzvimbo ine mukurumbira yekushanya kuTurkey.
Moto wemusango ungangodaro wakatangwa nevashanyi vekuRussia vaifamba munzira yakakurumbira.
Vashanyi vekuRussia vakavharirwa panguva yekuferefetwa kwekutanga kwemamiriro echiitiko ichi.
Vadzimi vemoto veTurkey vakasundwa kusvika kumiganhu vachirwisa moto wemusango wegore rino.
NeMuvhuro, mapurisa eTurkey akasunga boka revashanyi veRussia mukati Antalya, pashure pokunge moto womusango washumwa munzvimbo ine miti yakawanda mumaruwa.
Maererano nevemutemo weko, vanhu vanomwe vekuRussia vanofungidzirwa kuti vakatanga moto wesango watanga pedyo nenzvimbo inofarirwa nevashanyi.
Vakuru venzvimbo munzvimbo yeÇağlarca vanoti moto weMugovera unogona kunge wakatangwa nemoto wemusasa wakamiswa neboka revashanyi vekuRussia vaifamba vachitevedza nzira inozivikanwa yeLycian Way.
Sekureva kwemutauriri weRussia diplomatic mission in Antalya, dare rakaita chisarudzo chekuchengeta vashanyi veRussia panguva yekuongorora kusati kwatongwa mamiriro echiitiko chacho.
Vamwe vanhu vatanhatu vakasungwawo mukati Teki muna Nyamavhuvhu, vachipomerwa mhosva yekupisa masango, panguva ino vachipomerwa mhosva yekupisa. Mapurisa akatozopindirawo kuti adzivirire vanhu vainge vava kutomhanyiswa nevanhu veko vainge vakatsamwa.
Vamwe vanhu vatatu vakambosungwa kuBodrum mushure mekunge mapurisa ati vabatwa vachikanda zvigubhu zvefodya nepahwindo remotokari vachityaira musango rakaoma.
Vadzimi vemoto veTurkey vakasundirwa kumiganhu pamusoro pezhizha vachirwisa moto wesango, mazhinji acho achityisidzira nzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi dzakatenderedza Antalya neMugla.
Kunenge 107 Teki moto waida matanho ekukurumidzira nevadzimi vemoto. Mazana evanhu akakuvara nekuda kwekupararira kwemoto uye zviuru zvakabviswa mudzimba dzavo.